Yotpo: Jikọtara Nlekọta Nlekọta Na Ecommerce Saịtị gị Martech Zone
Yotpo: Na-emekọ mmekọrịta mmadụ na ibe gị na saịtị Ecommerce gị
Na Tọzdee, Septemba 3, 2013 Monday, September 2, 2013 Douglas Karr
70% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-ekwu na nyocha nwere nnukwu mmetụta na mkpebi ịzụta ha (Source). 60% nke ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-egosi na nyocha bụ ihe kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa. Pasent 90 nke ndị na-eri ihe n’ onlinentanet na-atụkwasịkwa ndị mmadụ aro ha tụkwasịrị obi. N'iburu nke ahụ n'uche, ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị iji ọrụ nyochaa njide na ngwaahịa na ọrụ ha.
Nyocha nwere nsogbu maka saịtị ecommerce, n'agbanyeghị:
Nyocha na-adọta ma SPAM na nyocha na-ezighi ezi site na ndị asọmpi na-erughị ala.
Ozugbo ị mejuputara nyocha, ọ bụ igodo iji jide ọtụtụ i nwere ike ebe ọ bụ na peeji nke ngwaahịa na obere / enweghị nyocha abụghị ntụkwasị obi.
Enwebeghị njikọ siri ike maka usoro nyocha nke ecommerce na usoro mgbasa ozi.
Yotpo na-atụ anya ịgbanwe nke a site na nyocha nyocha ha, na-enyere ụlọ ahịa aka iwepụtakwu nyocha maka ngwaahịa ha, ma gosi ha ọmarịcha. Nke a bụ njegharị nke atụmatụ na arụmọrụ nke Yotpo.
Ibubata Nyocha - Ikwesighi ida nyocha gị dị ugbu a iji malite iji Yotpo. Anyị ga-ebubata nyocha gị site na ikpo okwu ọ bụla ị nọ.
Nhazi asụsụ - A na-eji Yotpo eme ihe n’ụwa niile. Ngwaọrụ anyị nwere ike ịtụgharị n'asụsụ ọ bụla mmadụ maara.
Lee anya ma nwekwaa mmezi - shoplọ ahịa gị pụrụ iche. Anyị na-asọpụrụ nke ahụ ma na-enye ọtụtụ nhazi, ma maka wijetị anyị na email Mgbe emailzụta Ozi.
Ngwá Ọrụ Ike Ike - nwere ike ịhọrọ nke ọma nke nyocha iji gosipụta na nke ị zoo. Mgbe obula inwetara nyocha ohuru, anyi g’eme ka imata adreesị ozi-e nke onye ahia, ka igwee kelee onye ahia a ma obu dozie nsogbu obula nwere ike ibilite.
Ozi Mgbe Purzụ - Na-emewanye nyocha. Yotpo na-ezigara ndị na-azụ ahịa gị ozi na-akpaghị aka, n'oge a kara aka mgbe ịzụrụ, iji gbaa ha ume ịhapụ nyocha. Ndị ahịa nwere ike ịhapụ nyocha ozugbo n'ime email, na-eme ka usoro ahụ dị mfe.
Nchịkọta ozi email dị omimi - Hụ otu esi eme ka mkpọsa email gị dị irè na nchịkọta miri emi.
Mee ka ndi obodo gi - iru ndi ahia ohuru site na ibiputa nyocha ohuru gi ozugbo na ibe gi. Yotpo na-enye gị ikelele ndị nlele na Facebook na Twitter. Ndị na-eso ụzọ gị nwere ike ịhapụ ihe wee pịa na posts ka ị gụọ nyocha. Choose na-ahọrọ nyocha ndị a ga-ebipụta.
Mmekọrịta mmekọrịta - Gbaa ndị ahịa gị ume ịkekọrịta nyocha ha na ọwa mmekọrịta ha. Mgbe onye na-azụ ahịa hapụrụ nyocha, Yotpo na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịkekọrịta ya na Facebook, Twitter, Google+, na LinkedIn.
Nyochaa onye zụtara ngwaahịa na ụlọ ahịa gị bara uru karịa nyocha nke onye na-agafe agafe. Yotpo na-ekenye ndị nyocha ọ bụla akara ngosi, ma na-atụle nyocha dabere na ịtụkwasị obi. Nke a na-agbakwunye akwa ntụkwasị obi nke egosiputara iji nyere aka n'ịchụ ahịa. Ndị ahịa nwere ike mechara mara na ha nwere ike ịtụkwasị obi n’ihe ha na-agụ. Yotpo na-enye ndị nwe ụlọ ahịa ọtụtụ ụlọ omimi nchịkọta iji nyere gị aka ịghọta ihe ndị ahịa gị na-amasị na ihe ha chọrọ ịhụ ka mma.
Yotpo nweere onwe iji ma ọ bụrụ na ị bụ obere azụmaahịa ọkara. Maka saịtị na-ewepụta ihe karịrị 1 nde peeji nke ọnwa / ọnwa, anyị na-enye Yotpo Enterprise.
Tags: ecommerce nyochanyocha n'efunnyocha ngwaahịanyocha mmadụ
Ihe Ize Ndụ abụghị Ntị, ọ bụ Okwu
Sep 3, 2013 na 6: 37 AM
Daalụ nke Douglas maka nnukwu ọkwa na Yotpo. Aha m bụ Justin Butlion na abụ m onye njikwa azụmaahịa nke Yotpo. Ana m anabata gị na ndị ọ bụla na-agụ akwụkwọ gị nwere ajụjụ ọ bụla ị ga-aza n'okpuru ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ masịrị, ịkpọtụrụ m site na email na justin@yotpo.com.
Sep 5, 2013 na 1: 40 AM
Nnukwu nyocha, Douglas. Yotpo na Magento na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ masịrị m otu o si enyere gị aka ịmalite iwulite eserese mmekọrịta gị na ndị nyocha gị.